OTU ESI ECHEKWA VIDIYO SITERE NA OZI ODNOKLASSNIKI - ỤMỤ KLAS - 2019
Na-echekwa vidiyo site na ozi na Odnoklassniki
Usoro ọ bụla ga-amalite n'oge na-adịghị anya. Ọ dịghị iche na kọmputa nyochaa. Ọ bụrụ na ikwenye na ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị nke akụrụngwa a, ọ bara uru ịlele ya na enyemaka nke ngwanrọ pụrụ iche. Ezi ihe nlereanya nke ngwanrọ dị otú a bụ TFT Monitor Test.
Inweta ozi na nhazi
Ịmalite iji ngwa a, ị ga-ahọrọ mkpebi nyocha, àgwà agba na ihuenyo ntutu ihuenyo. N'otu window ahụ, ị ​​nwere ike ịnweta ozi gbasara kaadị vidiyo, nyochaa na sistemụ arụmọrụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị nwere ike ịga n'ihu ule.
Ntụle nyocha ncha
Enwere ike ịnwale ule atọ a na ụdị a, nke ga-eme ka ịlele nhazi nke isi agba na onyinyo nke mgbanwe n'etiti ha.
Na-ejuputa ihuenyo na otu n'ime agba ndị mbụ: ọcha, nwa, ọbara ọbara, acha anụnụ anụnụ na ndị ọzọ.
Ụkpụrụ mbụ nke nwere ìhè dịgasị iche iche, haziri na ọnyá.
Ụdị nlele a ga-ekpebi ike nke nyocha iji gosipụta agba nke mgbanwe dịgasị iche iche.
Nrịgo nke diagonal na-amụbawanye site n'aka nri gaa n'aka ekpe.
Nyocha na-egosipụta ọkwa dị iche iche nke ọkwa ọkwa.
Nyocha dị iche
Ihe ọzọ dị mkpa nke nyocha ahụ, nke ga-enye gị ohere ịlele TFT Monitor Test, bụ ikike igosi ihe dị iche iche n'ụzọ ziri ezi.
A na-eji usoro ihe dị iche iche eme ihe iji chọpụta ọdịiche dị:
Nhọrọ dị mma.
Ihe ndị na-eme grid.
Obere okirikiri, zigzags na ndị ọzọ.
Nyocha ngosi ederede
Nnwale a ga-enye gị ohere ịlele nhazi nke ederede dị iche iche na font.
Nlele ngosi ngosi
Nke a nke ule ga-enye gị ohere ịhụ otú nyocha ahụ si egosiputa ihe.
Oghere nke otu n'ime agba ndị mbụ, na-agagharị na akara ogologo ma gosipụta site na ihu nke ihuenyo ahụ.
Ọtụtụ agba agba na-agagharị na akara ogologo.
Nkwenye dị elu nke njirimara nke nyocha ahụ;
Ọ bụrụ na ikwesiri ike ịrụ ọrụ nke onyunyo gị ma ọ bụ laptọọpụ, gbalịa jiri software maka ịnwale TFT Monitor Test. Ọ ga-enye gị ohere ịlele niile njirimara nke ihe nyocha ahụ site n'enyemaka nke ọtụtụ ule.
Download TFT Monitor Test maka n'efu
PassMark MonitorTest Nwunye Pixel Nwụrụ Anwụ Anyị na-ejikọta ihe nyocha mpụga na laptọọpụ Lelee nyocha maka pixels agbajiri na netwọk
TFT Monitor Test bụ otu n'ime mmemme maka ịnwale arụmọrụ nke nyocha site na-eduzi ule dịgasị iche iche nke àgwà ya.
Onye Mmepụta: TFT